नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बुटवलमा, राजधानी सारे नेकपा छाड्ने चेतावनी ! – kalikadainik.com
नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठक बुटवलमा, राजधानी सारे नेकपा छाड्ने चेतावनी !
सोमबार, आश्विन १९, २०७७ | ९:१५:१९ |
बुटवल, १९ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रदेश संसदीय दलको बैठक अहिले बुटवलमा बस्न लागेको छ ।
बैठकका लागि नेकपाका प्रदेश सांसदहरु बिहान ६ बजे नै इटाभट्टीको प्रदेशसभा भवन नजिकै रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका छन् । बिहान ७ बजेका लागि बैठकको समय निर्धारण गरिएपछि उनीहरु बिहान ६ बजे नै त्यहाँ पुगेको नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
गत शुक्रबार प्रदेश सरकारको निर्णयपछि संसदमा प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्न संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न नेकपाकै कतिपय सांसद मानेका छैनन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गरिरहेको छ ।
रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पालगायत जिल्लाका नेकपा सांसदले पनि राजधानी सार्ने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। शनिबार ५ घण्टा यसबारे उनीहरू छलफलमा जुटेका थिए । तर, कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकेपछि आज बैठक पुनः बोलाइएको हो ।
प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदसँग छलफल नगरी राजधानी र नाम सिफारिस गरेकोमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरोध पनि भइरहेको छ । राजधानी र नाम सिफारिसका लागि गठित समितिले दिएका विकल्प लत्याएको आरोप मुख्यमन्त्रीलाई लगाइएको छ ।
आज बिहान ७ बजे नेकपाको संसदीय दलको बैठक, ८ बजे सर्वदलीय र दिउँसो प्रदेशसभाको बैठक पनि बस्ने भएको छ ।
यसैबीच आइतबार बुटवलमा प्रदर्शन गरेका उद्योगी व्यवसायीले पार्टीको ह्वीप नमानेर जनताको पक्षमा आउन नेकपा सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । जनताको भावनाविपरीत राजधानी सार्ने निर्णय भए व्यापारी तथा विभिन्न संघसंस्थामा लागेका करिब दुई हजार जनाले पार्टी छाड्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।